I-Appointiv: Hlela futhi Uzenze Ngokuzenzakalelayo Ukuqokwa usebenzisa i-Salesforce | Martech Zone
I-Appointiv: Hlela futhi Uzenze Ngokuzenzakalelayo Ukuqokwa usebenzisa i-Salesforce
NgoMsombuluko, Mashi 21, 2022 NgoMsombuluko, Mashi 21, 2022 Douglas Karr
Elinye lamakhasimende ethu lisembonini yezokunakekelwa kwempilo futhi lasicela ukuba senze kanjalo hlola ukusetshenziswa kwabo kwe-Salesforce kanye nokuhlinzeka ngokuqeqeshwa nokuphatha okuthile ukuze bakwazi ukwandisa inzuzo yabo ekutshalweni kwezimali. Enye inzuzo yokusebenzisa inkundla efana ne-Salesforce ukwesekwa kwayo okumangalisayo kokuhlanganiswa kwezinkampani zangaphandle nokuhlanganiswa okukhiqiziwe ngokusebenzisa imakethe yohlelo lwayo lokusebenza, I-AppExchange.
Enye yezinguquko ezibalulekile zokuziphatha ezenzeke ku- uhambo lomthengi ku-inthanethi yikhono lokuzisiza. Njengomthengi, ngifuna ukucwaninga izinkinga ku-inthanethi, ngihlonze izixazululo, ngihlole abathengisi, futhi… ekugcineni… ngifinyelele entanjeni ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuba ngixhumane nomuntu othengisayo.
Ukuhlela Ukuqokwa Okuzenzakalelayo
Sonke sidlule ekuhleleni isihogo… sibuyela emuva naphambili phakathi kwabo bonke abenzi bezinqumo ababalulekile ku-imeyili ukuze sizame ukuthola isikhathi esikahle sokuxhuma nokuba nomhlangano. Ngiyayinyanya le nqubo… futhi sitshale imali ekuhleleni i-aphoyintimenti ezenzakalelayo ukuze amathemba ethu namakhasimende ahlangane nathi.
Okuzenzakalelayo, ukuhlela i-aphoyintimenti yokuzenzela kuyindlela enhle yokwenyusa amanani eshejuli ye-aphoyintimenti yethimba lakho labadayisi. Lezi zinkundla ziqhathanisa amakhalenda futhi zithola isikhathi esivamile phakathi kwamaqembu, ngisho namathimba ewonke. Kodwa kuthiwani uma inhlangano yakho isebenzisa i-Salesforce futhi idinga lowo msebenzi urekhodwe kokuthi Sales Cloud?
I-Appointiv yenza i-aphoyintimenti eyinkimbinkimbi ukuhlela umoya ohelezayo ngesixazululo esilungiselelwe, esivumelana nezimo esixhaswe yi-Salesforce ngo-100%. Yenza ngokuzenzakalela izinqubo ezenziwa ngesandla futhi ubuke umsebenzi wakho uqala ukugeleza! I-Appointiv a Uhlelo lokusebenza lwendabuko lwe-Salesforce okusho ukuthi umane ulanda ku-AppExchange futhi uqalise - akukho ukuhlanganiswa okudingekayo!
Nge-Appointiv, ungavumela amakhasimende akho ukuthi abhukhe futhi aphathe ama-aphoyintimenti awo ngoba lonke iqembu lakho litholakala kubuyekezwa ku-Salesforce ngesikhathi sangempela kungakhathaliseki ukuthi lisebenzisa liphi ikhalenda. I-Appointiv ihlinzeka ngesixazululo esingenazinkinga sokuhlela esivumela ngisho namalungu eqembu amaningi anezinhlelo namakhalenda ahlukahlukene.
Ukusetha kulula, kufaka phakathi ifomu lewebhu nokwenza uphawu lwakho ngendlela oyifisayo ngohlelo lokusebenza lwe-Appointiv:
Intengo ye-Appointiv isekelwe kumsebenzisi ngamunye… futhi ungafaka nabasingathi bemihlangano bangaphandle abangenayo ilayisense ye-Salesforce yenkokhelo encishisiwe. Intengo esobala iphinde isho:
Awekho amalayisensi engeziwe adingekayo kubasebenzisi bakho be-Salesforce Experience (Umphakathi).
Alikho ilayisensi eyengeziwe ye-Salesforce yokufinyelela i-API edingekayo kuma-orgs we-Salesforce Professional Edition.
Awekho amalayisensi engeziwe e-Salesforce adingekayo ukuze usethe abasingathi bakho abangeyona i-Salesforce.
I-Appointiv ayilokothi igcine idatha yekhasimende ngaphandle kwesenzakalo sakho se-Salesforce... ngakho-ke akukho ukukhathazeka mayelana nezindaba zokulawula kanye namasayithi ezinkampani zangaphandle okungenzeka ukuthi zigaya noma zidlulisela idatha emuva naphambili.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala Esimisiwe
Ukudalula: Nginguzakwethu ku Highbridge kodwa angazihlanganisi ne-Appointiv.
Tags: ukuguqulaappointivukuhlela isikhathi sokuqokwaukuhlanganiswa kwekhalendaama-aphoyintimenti okuthengisaifu lokuthengisasalesforceukuguqulwa kokuthengiselanaukuhlela aphoyintimenti ye-salesforceukuhlanganiswa kwekhalenda ye-salesforceama-aphoyintimenti ewebhu
Izinhlelo zokusebenza ze-Elfsight: I-Ecommerce Eshumekeka Kalula, Ifomu, Okuqukethwe, kanye Namawijethi Omphakathi Wewebhusayithi Yakho